[21 / 10 / 2019] 40 သည် Konya နှင့် Karaman အကြားအမြန်ရထားဖြင့်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းကျလိမ့်မည်	42 Konya
[21 / 10 / 2019] ဝတ်ဆင်ရထားလမ်းများကို Ankara မြေအောက်ရထားသက်တမ်းတိုးသည်	06 တူရကီ
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး26 Eskisehirအဆိုပါကန်ထရိုက်တာယ်ယူရန်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူအမြဲတမ်းအလုပ်သမားပို့ဆောင်
30 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 26 Eskisehir, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ဂျော့ဘ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, Institute, ခေါင်းစီးသတင်း, Tulomsas, တူရကီ 0
Teo နေဖြင့်ထုတ်ဝေခဲ့သည့်ကြေငြာချက်, အဆိုအရ TULOMSAS အတွင်းကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိဝန်ထမ်းများမရှိခြင်းအဘို့အမှတဆင့်ဝယ်ယူမှုစေမည်။ ဤတွင်အခြေအနေများနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြစ်ကြသည်။
30 စက်တင်ဘာလ 2019 ကျင်းပမည့်နေသောပုံနှိပ်ထုတ်ဝေစုဆောင်းမှုကြော်ငြာတွေ, အဆိုအရလူထုအဖွဲ့အစည်းများ၏နေ့စွဲကနေ scan ။ ဤအခြေအနေတွင်မှာတရားဝင်ပြန်တမ်းနှင့်တူရကီကနေတဆင့်ကြေငြာစေမည်, တူရကီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှစက်ခေါင်းများနှင့်အမြဲတမ်းအလုပျသမားစုဆောင်း၏အင်ဂျင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကော်ပိုရေးရှင်းအထွေထွေညွှန်ကြားမှုအရသိရသည်။
တူရကီ 3-လူကိုအသင်း၏အတွင်း TULOMSAS နှင့်အတူဝယ်ယူမှုကို process မှအလုပျသမားမြား၏စက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကော်ပိုရေးရှင်းအထွေထွေညွှန်ကြားမှုပြုပါမည်ဟုသူကဆိုသည်။ ဒီဦးတည်ချက်အတွက်ဝယ်ယူမှု, Machinery, ဆောက်လုပ်ရေးစက်, Machinery ချောဆီကိုနှင့်ချောဆီအရည်ကြည် Teknlojilers, Thermal Power ကစက်ရုံနှင့်ဧရိယာ၌လျှပ်စစ်နှင့်လျှပ်စစ်နည်းပညာ2လူတွေအတွက်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကိုကူညီခဲ့စက်နှင့်ကိရိယာ 1 စုဆောင်းမှုကိုဖန်ဆင်းပါလိမ့်မည်ကြေညာခဲ့သည်။
တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကော်ပိုရေးရှင်းအထွေထွေဟောင်း-ယုံကြည်စိတ်ချမှု၏ညွှန်ကြားမှုဒါမှမဟုတ်3န်ထမ်းများအနေဖြင့် Anti-အကြမ်းဖက်မှုဒဏ်ရာရသူကိုယ်စားလှယ်လောင်းကြောင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ status တူရကီvatabdaşဖြစ်လာဖို့မှတ်တမ်းအစီရင်ခံရန်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်အများပြည်သူအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမဟုတ်, မိမိတာဝန်လုပ်နေတာကနေသူ့ကိုတားဆီးအံ့သောငှါမဆိုကျန်းမာရေးပြဿနာများမရှိဘဲမည်လော, မဆိုလူမှုရေး အဟောင်းကိုဖြစ်ခြင်းထိုကဲ့သို့သော 18 နှစ်ပေါင်းပြီးစီးတော်မူပြီးမှအဖြစ်အရည်အသွေးတွေ, ရှာတဲ့ပင်စင်သို့မဟုတ်လုံခြုံရေးအေဂျင်စီများမခံမထားဘူး။
30 လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်၏စာအုပျ၏ရက်စွဲစက်တင်ဘာလ 2019 ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှောင်းပိုင်းအောက်တိုဘာလ 04 2019 သူတို့ရဲ့လျှောက်လွှာသည်အထိလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်များ၏ကြေငြာချက်ရက်စွဲနှင့်အတူစတင်လိုက်ပါပြီ။ Applications ကို Teo ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ၏မှတ်တမ်းများရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါသည်တူရကီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှတဆင့်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ (İşinolsမှ)
ဂျော့ဘ်: အဆိုပါကန်ထရိုက်တာ Inc က ဟောင်းများယုံကြည်မှုများအလုပ်သမားရေးရာအမြဲတမ်းပစ္စည်းဝယ်ယူရေး 2015 12 / 08 / 2015 အဆိုပါကန်ထရိုက်တာ Inc က ဟောင်းများယုံကြည်မှုများအလုပ်သမားရေးရာအမြဲတမ်း 2015 Reception: နိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းရေးရာသမ္မတ, တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Inc ကိုအားဖြင့် အမြဲတမ်းအလုပျသမားဟောင်းပြစ်မှုထင်ရှားကြော်ငြာစုဆောင်းစာတိုက်၏ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်4။ နိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းရေးရာသမ္မတ, တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Inc ကိုအားဖြင့် စာတိုက်၏4ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေဟောင်း-ပြစ်မှုထင်ရှားအမြဲတမ်းလုပ်သားများကြေညာခဲ့သည်လိမ့်မည်။ တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Inc က အမြဲတမ်းအလုပျသမားမြားအတှကျအထွေထွေညွှန်ကြားမှု (TULOMSAS Inc က) Anti-အကြမ်းဖက်မှုဟောင်းပြစ်မှုထင်ရှားသို့မဟုတ်လွန်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများလျှောက်ထားနိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်ကြော်ငြာတွေ,4။ 1 Fitter, လြှပျစစျနှင့်ကိုးကား 1210 စားသုံးမှုအရင်းအမြစ်များ Technician အသြဂုတ်လ 19 သြဂုတ်လမှ ...
အဆိုပါကန်ထရိုက်တာဝယ်ယူမသန်စွမ်းအလုပ်သမားများအမြဲတမ်းလုပ်နေတယ် 13 / 02 / 2018 Reception ရပ်အဆိုပါကန်ထရိုက်တာမသန်စွမ်းအလုပ်သမားများလုပ်နေတယ်: နိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းရေးရာသမ္မတ, တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့်ကြော်ငြာကိုမသန်စွမ်း Corporation ၏စုဆောင်းမှုစေမည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကော်ပိုရေးရှင်းပါတီဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်ကြော်ငြာတွေမသန်စွမ်းလုပ်သားများကိုစုဆောင်းလုပ်ခံရဖို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ပြည်နယ်ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန site ပေါ်တွင်ကြော်ငြာကြေငြာမှာတည်ရှိပါတယ်; "1 ကြော်ငြာတွေကိုအောက်တွင်အလုပ်အကိုင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကတွဲဘက်ဒီဂရီဘွဲ့ရမသန်စွမ်းအမြဲတမ်းအလုပျသမားဖြစ်လိမ့်မည်။ အလုပ်သမားများအတွက်လျှောက်ထားခံရဖို့ပြည်သူ့ Institution များအတွက်စည်းမျဉ်းဥပဒေ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီနှင့်စပ်လျဉ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အခြေခံသဘောတရားများတူရကီစီးပွားရေးကောင်စီမှတဆင့်ဝယ်ယူမှုလုပ်ရမည် Received ။ ၏တူရကီအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီညွှန်ကြားမှုအထွေထွေအဘို့အအလုပ်သမားရေးရာဝယ်လိုအားအခြေအနေများ ...
အဆိုပါကန်ထရိုက်တာအမြဲတမ်းပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအလုပ်သမား Make 40 မည်! 08 / 04 / 2019 အများပြည်သူပုဂ္ဂိုလ်များစုဆောင်းမှု 40 8 ၏တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကော်ပိုရေးရှင်းအထွေထွေညွှန်ကြားမှု TULOMSAS application ကိုဧပြီလ 2019 ရက်စွဲပါတရားဝင်ပြန်တမ်းထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ပို့စ်တင်သည်။ လျှောက်လွှာအသေးစိတ်အရပ်ဘက်ကျွန်တို့ကန်ထရိုက်တာစုဆောင်းမှု။ အဆိုပါကန်ထရိုက်တာစာတိုက်၏ 40 ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေအမြဲတမ်းစုဆောင်းမှုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ကိုဖန်ဆင်းပါလိမ့်မည်။ ဧပြီလအမျှလျှောက်ထား TULOMSAS 40 8 2019 ၏စုဆောင်းမှုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်တူရကီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှက်ဘ်ဆိုဒ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပါလိမ့်မည်။ တွဲဖက်ဒီဂရီဘွဲ့ရ 40 စုဆောင်းမှု Tulomsas များအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ 40 မှTÜLOMSAŞတူရကီစီးပွားရေးကောင်စီဧပြီလ 08 2019 ၏ website တွင်အများပြည်သူအတွင်းစားသုံးမှုအလုပ်သမားအပါအဝင်ငှားရမ်းအခြေအနေများကြေညာခဲ့သည် - 12 ...
TCDD ပို့ဆောင်ရေးအလုပ်သမားများယ်ယူရန်ထုတ်ဝေခဲ့ဦးဆောင်! 09 / 06 / 2017 TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကို, ထို website တွင်ဟောင်းပြစ်မှုထင်ရှား၏စုဆောင်းမှုနှင့် ပတ်သက်. ခွဲခြားပြည်နယ်ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာနဖြန့်ချိခဲ့သည်။ တောင်းဆိုထားသော status ကိုကြေငြာအတွက်ကြေငြာခဲ့သည်ကိုက်ညီသည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုကိုးကား၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများIŞKURကျော်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဟောင်းပြစ်မှုထင်ရှားယောဘကိုဖျေါပွခကျြမြားနှငျ့အထှထှေအခြေအနေများအပိုင်းဘို့ငါတို့လုပ်သားအင်အားတောင်းဆိုမှုကိုပို့စ်တင်စဉ်အသိပေးစာ Eskisehir ဂိုဒေါင်ညွှန်ကြားမှုစက်ပြင် (စက်ပြင်-လုပ်တဲ့စက်ခေါင်း) ယူပြီးအလုပ်သမားထုတ်ဝေ DPB အင်တာနက် SITE ကိုအနုပညာလက်မောင်း 1 အတွက်စုဆောင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းကိစ္စရပ်များအပေါ်ကြေငြာသွားမည်နောက်ဆုံးစာရင်းထဲတွင်ရရန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကဖော်ပြခဲ့သည်İSKUR, နှုတ် စာမေးပွဲဖြေဆို join ဖို့အောက်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းမိတ္တူနှင့်အတူ TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က အထွေထွေညွှန်ကြားမှုက်ဘ်ဆိုက် (www.tcddtasimacilik.gov.t ဖြစ်ပါသည်။ ) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းကိုခံရလိမ့်မည် ...
TCDD 157 အလုပ်သမားများန်ထမ်းခေါ်ယူမှုသတိပြုပါထုတ်ဝေပြီးပါပြီ! 12 / 11 / 2018 စုစုပေါင်း TCDD မှကွဲပြားခြားနားသောဒေသများတွင်တည်ရှိသောရုံးများအတွက်ဝန်ထမ်းအလုပ်သမားများ '' မရှိခြင်းနှင့်တွေ့ဆုံရန် 157 နေရာလွတ်နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များလုပ်သားများစုဆောင်းမှုစေရန်စီမံချက်များကြေညာခဲ့သည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ဇာတ်လမ်း၏အဆက်များအတွက်ကြော်ငြာများအကြောင်းကိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ နိုဝင်ဘာလ 10 2018 ပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) ရက်စွဲပါထုတ်ဝေခဲ့သည့်နိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန, နေဖြင့်ကြေငြာချက်အရသူကအလုပျသမားဝန်ထမ်းများဖြေရှင်းရန် On-site ကိုအလုပျသမားလုပ်ဖို့န်ထမ်းများကင်းမဲ့ဟုပြောသည်။ ဤအခြေအနေတွင်မှာကြေညာချက်ပြည်နယ်ပုဂ္ဂိုလ်များလျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်၏ဦးခေါင်းကနေဖန်ဆင်းထားသည်နှင့်အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတူရကီစီးပွားရေးကောင်စီအားဖြင့်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ANNOUNCEMENT အသေးစိတ်: စုစုပေါင်း 157 အမျိုးမျိုးသော sabata လက်မောင်းအတွက် TCDD အတွက်ထုတ်ဝေသောကြော်ငြာအရ ...
40 သည် Konya နှင့် Karaman အကြားအမြန်ရထားဖြင့်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းကျလိမ့်မည်
ဂျော့ဘ်: အဆိုပါကန်ထရိုက်တာ Inc က ဟောင်းများယုံကြည်မှုများအလုပ်သမားရေးရာအမြဲတမ်းပစ္စည်းဝယ်ယူရေး 2015
အဆိုပါကန်ထရိုက်တာအမြဲတမ်းပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအလုပ်သမား Make 40 မည်!
TCDD 157 အလုပ်သမားများန်ထမ်းခေါ်ယူမှုသတိပြုပါထုတ်ဝေပြီးပါပြီ!
TCDD 356 အလုပ်သမားရေးရာချိန်းအစားထိုးကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရာထားရှိကြေညာချက်ထုတ်ဝေပြီးပါပြီ!
ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ TCDD 356 လုပ်သားများနေရာထားရှိကြေညာချက် Reception အစားထိုးကိုယ်စားလှယ်လောင်း
TCDD 356 အလုပ်သမားရေးရာချိန်းသတိပြုပါဟာခံတွင်းစာမေးပွဲအတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပြီး
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (392) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (633) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)